अति उद्योगीकरणले ल्याएको विपत्ति « LiveMandu
अति उद्योगीकरणले ल्याएको विपत्ति
२७ चैत्र २०७८, आईतवार ०६:४४
औद्योगिक क्रान्तिपूर्व वस्तुहरूको उत्पादन गर्दा मेशिन प्रयोग हुन्थेन। मानिसहरू केवल हातले आवश्यक सामान निर्माण गर्थे। हरेक वस्तु हातले निर्माण गर्दा थोरै समयमा ठूलो परिमाणमा उत्पादन सम्भव थिएन। त्यसकारण जे जति उत्पादन वा निर्माण हुन्थ्यो त्यो केवल जीवन निर्वाहका लागि हुन्थ्यो। औद्योगिक क्रान्तिपूर्व उत्पादनका लागि हातको प्रयोग गरिने भएकोले ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न सम्भव नभएर व्यक्तिहरू धनी हुन कठिन थियो। औद्योगिक क्रान्तिपूर्व धनी र गरीबबीचको दूरी निकै कम थियो। धनीद्वारा गरीबमाथि गरिने शोषणको मात्रा पनि ज्यादै कम थियो।
सन् १७६० मा बेलायतमा औद्योगिक क्रान्तिको सूत्रपात भयो। सन् १७६० देखि १८४० सम्म चलेको त्यो औद्योगिक क्रान्तिले बेलायतलगायत युरोपका अन्य मुलुकहरूको आर्थिक स्थिति निकै बलियो पारिदियो। अमेरिकाले पनि औद्योगिक क्रान्तिको ठूलो फाइदा उठायो। बेलायतबाट बसाइँ सर्दा उद्योग व्यवस्थापनको विशेष अनुभव लिएर आएका बेलायतीहरूले उद्योग सञ्चालन गरे र अमेरिकालाई धनी तुल्याए।
यही कालमा बेलायतमा भापबाट चल्ने इन्जिन भएको रेलको आविष्कार र व्यापक प्रयोग भयो। कपडा उत्पादन, फलाम उत्पादन आदिमा मेशीन प्रयोग गदाए उत्पादन सजिलो भयो र छोटो समयमा ठूलो परिमाणमा अनेक वस्तु उत्पादन गर्न सम्भव भयो। कारखाना प्रणाली र व्यवस्थित वितरणले ठूलो परिमाणमा उत्पादन त सम्भव भयो नै, वितरण पनि अनेक स्थानमा गर्न सकियो। परिणमस्वरूप बेलायत र युरोपका अन्य देशहरूमा धनढ्यहरूको सङ्ख्या ह्वात्तै बढ्यो।
उपनिवेश स्थापना गर्न दक्षिण एशिया पुगेका अङ्ग्रेजहरूले मुख्यगरी भारतमा औद्योगिक क्रान्तिको विशेष लहर पुर्याए। कुनै समय यस्तो थियो जब औद्योगिक क्षेत्रमा भारत चीनभन्दा निकै अगाडि थियो। अंग्रेजहरूले ल्याएका अनुभवले अहिलेको भारत (त्यस बेलाका अनेक देशहरू) लाई औद्योगिक विकासतर्फ अग्रसर हुन निकै सहयोग पुर्यायो।
अहिले वर्तमान विश्वमा, औद्योगिक क्षेत्रले चरम विकास गरेको छ। अहिले औद्योगिक उत्पादनको क्षेत्रमा मेशीनको प्रयोगका साथै प्रविधि पनि निकै उपयोग हुन्छ। अहिले उत्पादन र वितरण अभूतपूर्व किसिमले सरल एवं प्रभावकारी भएको छ।
यस आलेखको उद्देश्य भने अति उद्योगीकरणले मानव जीवनमा कति सकारात्मक र कति नकारात्मक प्रभाव पार्यो त्यसबारे चर्चा गर्नुरहेको छ। उद्योगीकरणले हाम्रो जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पारेको सजिलै देखिन सक्छ, आउनुहोस् यसले पार्ने प्रायः अदृश्य तर नकारात्मक प्रभावबारे चर्चा गरौं।
औद्योगिक क्रान्तिपछिको स्थिति विशेष किसिमको देखियो। विभिन्न देशमा ठूला–ठूला शहर स्थापना भए। कृषि कार्यतर्फ व्यक्तिहरूको आकर्षण घटेकोले शहरहरूमा ठूलो सङ्ख्यामा बसोवास हुन थाल्यो। शहरहरूमा उद्योग र व्यापार ठूलो परिमाणमा हुने भएकोले रोजगारको खोजी गर्दै मानिसहरू गाउँ छाडेर शहरतिर पलायन हुन थाले। यसरी उदाहरणका लागि, कुनै एउटै परिवारका चार सदस्य रोजगारका लागि चार भिन्न भिन्न शहरमा पुगे। कुनै एक परिवारका चारजना रोजगारका लागि चार पृथकपृथक शहरमा पुग्नु परेकोले पारिवार नराम्ररी विखण्डित भयो। कृषि युगमा भने परिवारका सबै सदस्य मिलेर कृषि कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकोले कृषि युगमा दर्दनाक किसिमले परिवारहरू विखण्डित हुने स्थिति थिएन। अति उद्योगीकरणले अहिले विश्वभरि परिवारलाई अति दुःखद किसिमले विखण्डित पारिदिएको छ। अहिले एउटै परिवारका सबै सदस्य एउटै शहरमा बस्नु प्रायः असम्भव हुन पुगेको छ।
कृषि युगमा परिवारका सदस्यहरू मिलेर सामूहिक उत्पादन गर्दथे। उत्पादनको वितरण वा उपभोग उनीहरूबीच समान किसिमले हुन्थ्यो। तर मानव सभ्यताले औद्योगिक युगमा प्रवेश गरेपछि एउटै परिवारका सदस्यहरू आफ्नो बौद्धिक क्षमता अनुसार फरक–फरक किसिमले आय आर्जन गर्न सके। एउटै परिवारमा, त्यसका सदस्यहरू फरक–फरक किसिमले आय आर्जन गर्न सक्ने स्थितिमा पुगेको हुनाले फरक–फरक आम्दानीले गर्दा परिवार अनेक कलहमा फसे। एउटै परिवारमा कम आय भएका सदस्य बढी आय भएका सदस्यहरूबाट अपहेलित भएको महसूस गर्न बाध्य भए। यो स्थिति खासगरी दक्षिण एशियामा बढी देखियो।
अनावश्यक वस्तु एवं सेवा उत्पादनः
अहिले यो अति औद्योगिक युगमा केवल त्यस्ता वस्तु उत्पादन गर्न उत्पादकहरूले बढी जोड दिइरहेका छन् जसमा उनीहरूलाई बढी मुनाफा होस्। कुनै वस्तुले उपभोक्ताहरूको हित गर्नुभन्दा त्यो वस्तुले उत्पादकलाई कसरी बढी मुनाफा हुन्छ, त्यसतर्फ उत्पादकहरूको ध्यान केन्द्रित हुन पुगेको छ। यो अति डरलाग्दो स्थिति हो। यस कारणले गर्दा अहिले बजारमा स्वस्थ खाद्यान्नभन्दा उत्पादक र बिक्रेतालाई बढी मुनाफा हुने खाद्यान्न वा वस्तुहरू बिक्रीमा राखिएको पाइन्छ। अबको केही दशकमा धेरै जमीन उपयोग गरेर थोरै फल्ने र उत्पादकलाई मुनाफ कम हुने वस्तुहरू– जस्तै जीरा, धनिया, मेथी, तोरी आदिको उत्पादन कम हुनेछ वा त्यसको मूल्य अति चर्को हुनेछ। यसविपरीत कम जमीन उपयोग गरेर धेरै फल्ने र उत्पादक एवं बिक्रेताहरूलाई बढी मुनाफा हुने वस्तुहरू बिक्री हुनेछन् । जस्तै कोभी, फर्सी, भन्टा आदिको उत्पादन बढी हुनेछ भने करैला, झिगुनी, भिन्डी आदि हराएर जानेछन्।
यसैगरी बजारमा उपभोक्ताहरूलाई आवश्यक नभएका तर उत्पादकलाई बढी नाफा हुने वस्तुहरू–जस्तै स्मार्ट फोन, स्मार्ट वाच, आइपैड, टेबलेट बजारमा ठूलो परिमाणमा देखा पर्नेछन्। यी वस्तुहरू प्राप्त गर्न एकातिर उपभोक्ताहरूमा लालसा ह्वात्त बढ्ने छ भने कम आय भएका केही व्यक्तिहरू यस्ता सामान खरीद गर्न अनेक आर्थिक अपराध गर्न समेत पनि तत्पर हुनेछन्।
सन् २०१९ मा आरम्भ भएको कोभिड–१९ बाट संसारभरिमा अहिलेसम्म जति मानिसको मृत्यु भयो त्योभन्दा बढी मानिसको मृत्यु वातावरणमा आएको ह्रासले गर्दा भएको छ। अहिले संसारका ठूला शहरहरू वायु प्रदूषणले पीडित छन् । लाहोर (पाकिस्तान), गाजियाबाद, (भारत), दिल्ली (भारत), आग्वहुसकालीइन्तेज (मेक्सिको), लखनऊ (भारत), मुजफ्फरनगर (भारत), ढाका (बङ्गलादेश), पेशावर (पाकिस्तान) र हाजीपुर (भारत) विश्वका क्रमशः प्रथम देखि दशौं अति प्रदूषित शहर हुन पुगेका छन्। भनिन्छ दिल्लीमा बस्ने व्यक्तिमध्ये चुरोट नखानेले पनि वायु प्रदुषणले गर्दा दिनको २० देखि २५ चुरोट खाए सरह (नोक्सान) हुन्छ।
कसरी विश्वभरि वायु प्रदूषित भएको होला?
यातायातका साधन (हवाईजहाज, मोटर, पानीजहाज) तथा उद्योग सञ्चालनका लागि ठूलो परिमाणमा फोसिल फ्युल (पेट्रोलिय पदार्थ, कोइला, प्राकृतिक ग्याँस आदि) को प्रयोग हुन्छ। बढीभन्दा बढी वस्तु उत्पादन गरेर ती सामग्री बजारसम्म पुर्याउन उद्योग र यातायातका साधनहरूको निकै प्रयोग हुन्छ। अर्कोतिर बढी मुनाफा गर्न व्यापारीहरूले ठूलो परिमाणमा फोसिल फ्युल उपयोग गर्छन्। विश्वभरि भएका अनेक ठूला–ठूला अनुसन्धानबाट के पत्ता लागेको छ भने फोसिल फ्युलको उपयोगले गर्दा विश्व वातावरणको ह्रास डरलाग्दो किसिमले भएको छ। अति उद्योगीकरणले हाम्रो जीवन पहिलेभन्दा निकै सरल त भएको छ र केही व्यक्ति करोडौं कमाउन र अति धनी बन्न सफल भएका छन्। तर यो स्थितिसम्म पुग्न करोडौं व्यक्तिहरूको ज्यान गएको छ।
के अति उद्योगीकरणले हामीलाई यथार्थमा अति फाइदा भएको छ? अब यो महत्वपूर्ण प्रश्नको उत्तर खोजौं। अति उद्योगीकरणले हामीले जति पाएका छौं त्योभन्दा बढी गुमाएका छौं। अति उद्योगीकरणले गर्दा नेपाल, भारत, बङ्गलादेश, पकिस्तानजस्ता देशमा परिवारहरू अभूतपूर्व किसिमले विखण्डित भएका छन्। आगामी वर्षहरूमा नेपाल, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तानजस्ता मुलुकको एकचौथाई जनसङ्ख्याको बसोवास विदेशमा हुने स्थिति आउन सक्छ।
अति उद्योगीकरणले मानिसमा लालसा यति बढी भएको छ कि जस्तोसुकै राम्रो–नराम्रो काम गरेर पनि व्यक्तिहरू अर्ध एवं पूर्ण विलासी वस्तु खरीद गर्न लालायित छन्। केवल सुवियायुक्त जीवन बिताउने लालसामा अहिले, नेपालको सन्दर्भमा, ठूलो सङ्ख्यामा मानिस आफ्नो परिवार, गाउँ, समाज र संस्कृति परित्याग गरेर विदेश पलायन हुँदैछन्।
अति उद्योगीकरणको सर्वाधिक ठूलो अवगुण त के छ भने यसले हामीलाई ‘नगद संस्कृतिमा बाँच्ने’ पारिदिएको छ। हामी आफू अब केही पनि उत्पादन नगर्ने र आवश्यक सबै सामानहरु बजारबाट खरीद गर्ने स्थितिमा पुगेका छौं। प्रायः अहिले हामी, विश्वभरि नै, केवल श्रम मात्र उत्पादन गर्छौं। आफूले उत्पादन गरेको त्यो श्रम बेचेर नगद प्राप्त गर्छौं। प्राप्त नगदले जीवन निर्वाहका लागि अवश्यक पर्ने अनेक कुराहरू खरीद गर्छौं। आफूलाई आवश्यक पर्ने न्यूनतम वस्तुसम्म उत्पादन गर्ने स्थितिमा छैनौं। हामी अहिले डरलाग्दो किसिमले नगदमा निर्भर हुने स्थितिमा पुगेका छौं। के यो स्थिति सुखद हो?